Mapfekero, Hat Chikwata - YiXing International Logistics (GuangDong) CO, LTD
Zvipfeko, Shangu uye Hats, FBA musoro uchasarudza YXL
Miss Xie vanobva kuGuangzhou ndivo e-commerce maneja wekambani yekutengesa inoshanda mukutengesa zvipfeko zvemitambo, zvinotarisa kumisika yeEuropean neAmerica. Munguva pfupi yapfuura, nekuti kambani inokoshesa zvakanyanya mashandiro eAmazon chikuva uye inofunga nezvedambudziko rekushanda mutengo, Miss Xie vakatsamwa zvikuru nezvedambudziko rekutanga-rwendo rwekufambisa zvinhu zveFBA. Sezvo isu tese tichiziva kuti Logistics mutengo weFBA wakanyanyisa kukwirira, saka isu tinofanirwa kuve vanongwarira pakusarudza FBA anotungamira kuti tishande pamwe Ms Xie nekuenzanisa nekubvunzana kwepamhepo kune porsche Express logistics ndeye nyanzvi mune sino-isu FBA Musoro wekutumira kambani yekudyidzana kwenyika, saka mune yakapusa pamhepo mushure mekubvunzana kutaurirana kunogona kuburitsa pfungwa yekuvimba, zvakare kuita kusangana naPeggy Zhang anogona zvakare kutaura, kuburikidza naPeggy Zhang anofungisisa sevhisi zvakare nzwisisa FBA Musoro wekutakura pane nzira dzakawanda dzekutakura.
Nekudaro, Miss Xie zvakare ane huwandu hwakawanda hwezvinhu, izvo zvisingade yakakwira nguva muganho. Pamusoro pezvo, yekufungisisa kwemitengo yezvinhu, Mutariri Zhang anopawo zvirongwa zvinofambisa zvakanaka, achipa nzira yekutumira yeFBA yeYiXing clippers. Kuburikidza nekubatana pamwe, Ms. Xie munguva pfupi vanopa kurongedza uye logistics ruzivo rwekutanga runodiwa kuYixing Logisics, maneja Zhang anorongawo kupa iyo chaiyo kotesheni uye yemahara pciking kumusoro sevhisi, zvinhu zvese zvinoyerera zvakanyanya, panguva yeYXL zvakare ipa kune yakakodzera uye inoshanda logistics ruzivo rwekupa mhinduro, izvi regai Mai Xie vanzwe kuchengetedzwa masevhisi, kumashure zvakare kuenderera nekuchengetedza hukama hune hukama hwekudyidzana. Saka senge mbatya dzemitambo, shangu, ngowani uye zvimwe zvigadzirwa zvekupfeka kuAmazon, FBA musoro kusarudza Yixing Global Logistics! Tichasarudza chakakodzera kwazvo chako kutakura hurongwa hwekutakura zvinhu, chengetedza zvisina kukodzera mitengo kwauri, kudzikisa mashandiro ekushandisa, uye nekupa masevhisi akachengeteka uye anovimbiswa ekushandira, kuperekedza chako chekutakura nhumbi.
Naizvozvo, kana iwe uri mutengesi kuAmazon, unofanirwa kusarudza mumiriri weChinese weFBA musoro wekutakura, uyo anogona zvakare kukupa iwe kunhonga, kurongedza, kunyora mazita, kudzoka uye shanduko yemavara, imba yekuchengetera mhiri kwemakungwa uye mamwe masevhisi, isu tiri YiXing Global Zvigadzirwa.